Mpilalao baolina kitra Scottish
Mpilalao baolina kitra Alzeriana
Etazonia mpilalao baolina kitra
Mpilalao baolina kitra Oceania
Mpilalao baolina kitra Tiorka
Mpilalao baolina kitra mahazatra
rehetraMpilalao Football EnglishMpilalao baolina kitra ScottishMpilalao Football Welsh
Emile Smith Rowe tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Rhys Williams tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
John McGinn Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Jarrod Bowen Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Rafael Leao Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Tantara momba ny fahazazan'i Angelino momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Alassane Plea Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Houssem Aouar Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
rehetraMpilalao baolina kitra AlzerianaMpilalao Football any KameroneyMpilalao Football GhanianMpilalao Football any Ivory CoastMpilalao Football NizerianaMpilalao Football any Senegaly
Angelo Ogbonna tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Folarin Balogun tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Youssoufa Moukoko Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Arthur Masuaku tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
rehetraMpilalao Football ArzantinaMpilalao Football any BrezilaMpilalao Football KanadaMpilalao Football any ColumbianEtazonia mpilalao baolina kitraMpilalao Football any Orogoay
Ronald Araujo Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Raphinha Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
TANTARA AMIN'NY TAOLOTRA AMERIKANINA
Ny tantaram-pitiavan'i Moises Caicedo momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Leon Bailey tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
rehetraMpilalao baolina kitra OceaniaMpilalao baolina kitra Tiorka
Hakan Calhanoglu tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Cengiz ambanin'ny tantaran'ny tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
TANTARA ANTANAN'NY OCEANIANINA FOOTBOLA
rehetraMpilalao baolina kitra mahazatraFootball ElitesMpitantana Football
Ralph Hasenhuttl tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Marcelo Bielsa Zaza Ankizy Miampy Plus Untold Biography Facts
Home TANTARA ANTANAN'NY OCEANIANINA FOOTBOLA Mpilalao baolina kitra Oceania Tantaran'i Chris Wood Childhood momba ny zava-misy momba an'i Untold Biography Facts
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny lalao genius malaza fantatra amin'ny anaram-bosotra hoe “Woody". Ny tantaran'i Chris Wood Childhood Plus Plus momba ny tantaram-piainana dia mitondra fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao.
Ny fiainana sy ny fitsanganan'i Chris Wood. Credits sary: ​​DailyMail, FootballTop ary CambridgeFootball
Ny famakafakana dia misy ny fiainany tany am-boalohany sy ny fiainam-pianakaviany, ny fanabeazana ary ny fananganana kariera, ny fiainany teo am-piandohana, ny làlany mankany amin'ny tantara laza, mitombo laza tantara, fifandraisana, fiainana manokana, zava-misy momba ny fianakaviana sy ny fomba fiainany sns.
Eny, fantatry ny rehetra fa mpikomy manaitra ny masony amin'ny tanjona hamonoana tanjona. Na izany aza, vitsivitsy ihany no mandinika ny tantaram-piainan'i Chris Wood izay tena mahaliana. Raha tsy misy resaka intsony dia andao aloha.
Tantara momba ny fahazazan'i Chris Wood momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra - Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Manomboka, ny anarany feno dia Christopher Grant Wood. Chris Wood dia teraka tamin'ny andro faha-7 tamin'ny Desambra 1991 tamin'ny reniny Julie Wood ary rainy, Grant Wood any Auckland, tanàna any amin'ny North Island of New Zealand. Teraka tamin'ny taona faharoa izy ary zazalahy voalohany tamin'ny reniny izay araka ny sary eto ambany.
Chris Wood Mother sy Bebe
Chris Wood dia teraka tao amin'ny trano kristianina iray izay misy fotony miaramila ary anton'ny fianakavian'izy ireo. Ny renibeny izay naseho etsy ambony dia polisy miaramila efa misotro ronono talohan'ny nahafatesany. Nihalehibe izy niaraka tamin'ny anabaviny Chelsey Wood izay toa azy ihany koa dia lasa mpanao baolina vita nahavita azy.
Tantara momba ny fahazazan'i Chris Wood momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra - Fanabeazana sy fanabeazana
Na ny rahalahy na ny rahavaviny na any an-trano dia milalao mifanohitra foana. Nahazo famporisihan'ny ray aman-dreniny hiaraka tamin'ny rahavaviny i Onehunga Sports, izay nianarany hankafy fanatanjahantena ekipa.
Te hahalala bebe kokoa i Chris sy ny rahavaviny dia nifindra mba handray fanabeazana baolina kitra tao Wynrs, akademisiana monina any Auckland natsangan'i All White Wynton Rufer. Tao amin'ny Wyners Chris Wood no namolavola ny paikadiny ary vonona ny hiatrika fitsapana baolina kitra.
Tantara momba ny fahazazan'i Chris Wood momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra - Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Tamin'ny faha-11 taonany, nandao ny tanànan'i Newzealand Auckland ny fianakavian'i Wood ary nifindra tany amin'ny tanàna ambanivohitra Waikato any Cambridge, 24 kilometatra atsimoatsinanan'i Hamilton. Nifindra tany amin'ny tanàna ny fianakaviany "CambridgeFantatra amin'ny hoe "Ny Tanànan'ny Hazo sy Tompondaka". Nandritra ny fotoana dia nanatrika ny Sekolin'i St Paul Collegiate i Chris sy ny rahavaviny.
Chris dia nazoto nanohy ny asany tamin'ny nandaozany azy. Ny firehetam-pony amin'ny baolina kitra dia nahita azy nandalo fitsapana ary nisoratra anarana hilalao baolina zandriny niaraka tamin'ny klioba local - Cambridge FC. Ity ambany ity ny sarin'i Chris kely sy ireo mpiara-miasa aminy.
Chris Wood (sary eo amin'ny farany havia amin'ny afovoany afovoany) - Ny taonany voalohany niaraka tamin'ny Cambridge FC Academy.
Araka ny Tranonkala Cambridge FC, Rehefa 14 i Chris Wood, dia efa lehibe be izy - midika izany fa mafy sy matanjaka izy. Tamin'izany vanim-potoana izany, ny tanora dia vonona ny hilalao baolina kitra.
Tantara momba ny fahazazan'i Chris Wood momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra - Road to Fame
Tamin'izany, Ken Hobern, mpikambana ao amin'ny fianakavian'i Wood dia faly fa nahalala fa hanana ny endriny voalohany amin'ny ekipa zokiny indrindra ilay tanora. Fantatrao ve?… Nanome toky an'i Chris Wood i Ken $100 raha azony atao ny mahazo isa tsy fantatra ny tanjony dia minitra vitsy monja miala amin'ny toky nomeny.
Niditra teo amin'ny lalao i Chris ho mpisolo azy ary ny fankalazana ny tanjony rehefa avy nanatontosa ny amboarany izy dia nahitana fifangaro-pifaliana niaraka tamin'ny rantsantanany. Nahafaly ireo mpankafy sy ny fianakaviany manontolo izany zava-bita izany.
Taorian'ny tsodrano tamin'ny mpifaninana teo an-toerana Hamilton Wanderers tamin'ny vanim-potoana manaraka, dia nahasarika ny sain'ny klioban'ny ASB Premiership Waikato FC i Chris Wood izay nahazo azy tao 2007. Na dia niditra tao amin'ny klioba aza i Wood dia nanara-maso maro ireo klioba malaza tany Eropa izay nangataka ny soniany. Vao avy nilalao lalao 5 niaraka tamin'ny klioba, Chris Wood dia nalain'ny klioba anglisy, West Brom.
Tantara momba ny fahazazan'i Chris Wood momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra - Mitsangàna mba ho ankizilahy
Wood dia nanolorana an'i West Bromwich Albion's Academy ho an'ny mpanazatra Roger Wilkinson, izay nanangana fitsarana ho azy izay nolalovany tamina loko manidina. Raha tao amin'ny akademia, Chris Wood nahita endrika manankarena tanjona ho an'ny lafiny akademia ho an'ny tanora West Brom, zava-bita iray izay nanery ny mpanazatra azy hametraka azy ao amin'ny lisitry ny firarian-keviny.
Tamin'ny volana aprily 2009 naratra tamin'ny mpilalao West Brom marobe dia nahita Wood dia niantso antso ho an'ny ekipa West Brom. Nivoaka ny dabilio izy mba ho lasa New Zealander fahadimy izay hilalao amin'ny Ligy Premier. Nandritra ny Angletera dia nanompo tamim-panetren-tena izy tamin'ny fanaovana hetsika fampindramam-bola, nihanahery tamin'ny vanim-potoana sy nandraisana araka izay azony natao tamin'ny mpanazatra tsirairay.
Mandroso haingana amin'ny fotoana anoratana, Wood dia ekena ankehitriny ho mpikatroka veteran ho an'ny klioban'ny klioba anglisy, izay nanoratra tanjona mihoatra ny 100 tamin'ny klioba rehetra nilalaovany. Ilay mpikomy 6 ft 3 izay kapiteny lefitra an'ny Burnley FC tamin'ny fotoana nanoratana izao dia manana fiaraha-miasa matotra miaraka amin'ny mpitarika ara-panahin'ny klioba. Ashley Barnes.
Chris Wood Rise toame. Sary: PlanetFootball ary DailyStar
Tantara momba ny fahazazan'i Chris Wood momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra - Relationship Life
Miaraka amin'ny fiakarana laza dia azo antoka fa ny ankamaroan'ny mpankafy baolina kitra Burnley sy Newzealand dia tsy maintsy nieritreritra momba an'iza i Chris Wood Girlfriend na Wife. Lazaina ny marina! Tsy azo lavina ny zava-misy fa ny bikany bika dia tsy hahatonga azy ho olon-tiana ho an'ny vehivavy sasany mpankafy azy.
Saingy, ao ambadiky ny Newzealander nahomby, dia misy sipa manintona eo amin'ny olona tsara tarehy Kirsty Linnett. Ilay vehivavy sakaizan'i Chris Wood dia aseho eto ambany miaraka amin'ny lehilahy ao amin'ny fivarotana kafe iray ao Alderley Edge, Cheshire. Samy nifankatia izy ireo tamin'ny andro faha-14 tamin'ny Jolay 2015.
Nihaona tamin'i Chris Wood Wife- Kirsty Linnett. Bola ho an'ny TheGuardian
Fantatrao ve?… Ilay sakaizan'i Chris Wood dia mpilalao baolina kitra matihanina ihany koa. Tahaka ny tamin'ny fotoana nanoratana dia milalao ho an'ny ekipa iraisam-pirenena Liverpool sy Angletera eo ambany ekipa 23 iraisam-pirenena izy. Ity ambany ity ny sarin'i Kirsty Linnett mihetsika miaraka amin'ny klioba Liverpool, raha maka mpifaninana aminy izy.
Kirsty Linnett mihetsika ho an'i Liverpool. Bola ho an'ny TheGuardian
Samy mirehareha amin'ny lalan'ny asany ny samy sakaiza sy ny sakaiza. Araka an'i Kirsty… 'Tena hahafinaritra ny mitodika any aoriana rehefa mihalehibe isika ary milaza fa samy mila miaina ny fiainantsika isika nofy,'
Inona no mitovy amin'ireo mpivady roa, mampiaraka amin'ny Football Football matihanina: Ho an'ny Linnett sy Wood, "Tonga hatrany ny baolina kitra". Niaiky izy fa raha mpivady dia indraindray henjana amin'ny zava-bitan'ny tsirairay aorian'ny lalao. Samy tsy niady hevitra momba ny fanaraha-maso lavitra na i Linnett na i Chris satria ny baolina kitra dia miambina hatrany amin'ny fahitalavitra any an-trano.
Mbola mahagaga ny mpankafy sasany fa i Wood sy Linnett dia mbola tsy manam-bady toy ny tamin'ny fotoana nanoratana. Na izany aza, samy mitsara ny fiainany avokoa ny fitsarana azy ireo, azo antoka fa ny fanambadian'izy ireo dia mety ho dingana manaraka.
Chris Wood sy Kirsty Linnett- Mpivady baolina kitra matihanina tsara indrindra amin'ny Football
Tantara momba ny fahazazan'i Chris Wood momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra - Fiainana manokana
Ny hahafantaranao ny zava-misy momba ny zavamananaina Chris Wood Personal dia hanampy anao hanana sary tsara kokoa ny toetrany ivelan'ny filalaovana.
Asides football, Wood dia manaraka fanatanjahantena toy ny; hazakazaka soavaly, rugby union, cricket, baseball ary Netball. Tiany ny mandray anjara amin'ny fitifirana sy fangaro tenisy.
Ireto misy hetsika Chris Wood teny an-tsehatra. Sary: Twitter
Ho fanampin'ny fiainana manokana Chris Wood, izy dia olona tia fiaraha-monina, mifandray ary vonona hahafinaritra foana. Tsy dia miraharaha firy ny ho tonga lehibe, mieritreritra ary tsy manam-pitsaharana satria maro ny zavatra atao.
Tantara momba ny fahazazan'i Chris Wood momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra - Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Chris Wood, izay toa lasa mofomamy amin'ny fianakaviany, dia faly fa nanana izany nanamboatra ny lalan'ny fianakaviany mankany amin'ny fahaleovan-tena ara-bola noho ny baolina kitra. Ireto misy fampahalalana fanampiny momba ny olona ao amin'ny fianakaviany.
Chris Wood Dada: Grant Wood, izay tsy dia fantatra firy dia ny rain'i Chris. Mankasitraka azy amin'ny famporisihana ny zanany lahy sy ny zanany vavy hiara-hiasa ao Onehunga, izay tonga amin'ny klioba voalohany amin'izy ireo. Tsy toa ny vadiny, misy fampahalalam-baovao kely momba azy.
Chris Wood Mum: Julie Wood tsara tarehy no Neny Chris. Tsy toy ny vadiny, tsy nanao ezaka mitandrina mba hisorohana ny haino aman-jery izy. Ity ambany ity ny sarin'i Julie tsara tarehy miaraka amin'i Chris zanany lahy rehefa nanatrika ny andro ANZAC izy ireo izay nankalazany ny raiben'i Chris.
Mifanena amin'i Julie Wood- Renin'i Chris Wood. Sary: Twitter
Chris Wood Sister: Andao isika hiresaka aminao bebe kokoa momba an'i Chelsey izay rahavavin'i Chris Wood izay milalao baolina kitra toa azy. Chelsey nisolo tena ny fireneny, Nouvelle-Zélande ho latsaky ny 20 taona nandritra ny fiadiana ny amboara eran-tany ho an'ny vehivavy U2008 20 tany Chile. Chelsey dia tao anatin'ny fiadiana ny amboara eran-tany ho an'ny vehivavy U2010 20 tany Alemana ihany koa. Ny filalaovana Under-20 amin'ny taona 2008 dia midika izany fa antitra noho ny anadahiny izy.
Fantatrao ve?… Chelsey tamin'ny taona 4 dia nanomboka nilalao baolina niaraka tamin'ny rahalahiny. Fotoana iray tsy nanomboka nilalao teo amin'ny fianarany. Tamin'ny taona 4 ka hatramin'ny 12, i Chris Wood dia nilalao tamin'ny ekipa mitovy tamin'ilay anabavy zokiny tsara tarehy izay naseho etsy ambany.
Chris Wood Sister miaraka amin'ny rahalahiny. Ny trosa amin'ny Twitter
Chris Wood Dadabe: Anisan'ireo raibeny, Chris Wood dia nanakaiky ny iray amin'ireo zafikeliny izay tsy tara nefa tsy hadinony mihitsy. Ity ambany ity ny sarin'ny Granddad izay tena tiany. Tsarovy: Ny zafikelin'i Wood dia miaramila efa misotro ronono alohan'ny nandalovany.
Hihaona amin'ny Granddad an'i Wood izay lehilahy Ex-military talohan'ny nandalovany. Bola amin'ny Twitter
Tantara momba ny fahazazan'i Chris Wood momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra - Lifestyle
"Efa kalitao ny fananana an'io biby io !! Fiara nofinofy, tiavo ity!" Ireo no tenin'i Chris Wood rehefa mankasitraka ny fiarany izy, hira izay manome fahatsapana tsara kokoa ny fomba fiainany.
Toa an'i Chris Wood Lifestyle. Ny trosa amin'ny Twitter.
Ho an'ny hazo, dNy safidy eo anelanelan'ny fampiharana sy ny fahafinaretana eny an-kianja dia tsy safidy sarotra. Tiany ny mandany ny volan'ny baolina kitra amin'ny zavatra tiany.
Tantara momba ny fahazazan'i Chris Wood momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra - Untold Facts
Fantatrao ve?… Chris Wood dia iray amin'ireo anarana malaza indrindra hatrany Ny baolina kitra any New Zealand dia miahiahy. Hajaina be ny fandrosoana ka nanangana azy ho mpikambana ao amin'ny biraon'ny Fikambanan'ny Mpanao Football Professional New Zealand.
Mpikatroka ho an'ny Football Football Women: Inona koa no antenainao. Ny rahavavin'i Chris Wood sy ny vadiny ho mpilalao baolina kitra matihanina avokoa. Ny fahafoizan-tena nataon'ny rahavaviny sy ny tolona natrehan'ny sipany Linnett dia nahatonga an'i Wood ho mpisolo vava amin'ny fepetra tsara kokoa amin'ny lalao vehivavy. "Tsy ny fananana sipa milalao baolina kitra na rahavavy milalao baolina kitra no atao fa ny manao ny tsara. " Chris Wood indray mandeha nilaza tamin'ny mpiambina.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaran'ny Chris Wood Childhood sy ny Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, Miezaka ny hanana ny marina sy ny hitsiny izahay. Raha mahita zavatra tsy mety ianao, azafady mba zarao aminay amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany. Hanome lanja sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
Diary Football Diary
Wesley Fofana Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Misorata anarana amin'ny tantaram-piainan'ny Football Footballlogger!
Daty efa namboarina: 31 Desambra 2020
Daty navaozina: Novambra 12, 2020
Daty efa namboarina: 8 Oktobra 2020
Daty efa namboarina: 23 Desambra 2020
Ny tantaram-pitiavan'i Mario Gomez momba ny tantaram-pitiavana sy ny tantaram-piainana tsy fantatra
Alex Oxlade Chamberlain ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Daty efa namboarina: 27 Oktobra 2020
Daty efa namboarina: 23 Oktobra 2020
Daty efa namboarina: 4 Janoary 2021
Daty efa namboarina: 22 Oktobra 2020
Daty efa namboarina: 13 Oktobra 2020
Daty navaozina: Novambra 7, 2020